प्रदेश नं. २ मा एमालेको अवस्था कमजोर छ
मुकेश कुमार मिश्र, पत्रकार, रेडियो नेपाल
हामीले दिनहुँ समाचार सम्पादन र वाचन गर्ने गरेका छौँ । त्यसमा मैले के पाएको छुँ भने प्रदेश नं. २ को स्थानीय तह निर्वाचनको समाचारहरुलाई धेरै प्राथमिकता साथ हामी राख्ने गरेका छौं । आएका समाचारहरुको सम्पादन गर्दा के देखिएको छ भने एमाले पार्टीको कार्यक्रम एकदमै कम हुने गरेको छ, अरु पार्टीहरुको तुलनामा । किनभने कतिपय यस्ता समाचारहरु पनि आउने गरेका छन् कि मधेशको फलानो ठाउँमा एमाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले त्यहाँका स्थानीयले छिर्न दिएनन् । यसप्रकारको समाचारले के भन्न सकिन्छ भने एमाले पार्टीको अवस्था २ नं. प्रदेशमा कमजोर रहेको छ । एमाले पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि मधेशमा छिर्न गाह्रो मानि रहेको अवस्था छ ।